Udakwe washona obezakhele utshwala ngespirithi "omile" - Ilanga News
Home Izindaba Udakwe washona obezakhele utshwala ngespirithi “omile”
Udakwe washona obezakhele utshwala ngespirithi “omile”
Kuthiwa ubekhala ngokomela amambawu ngendlela engachazeki
UBEKHALA ngokomela utshwala owesilisa waseMalukazi, ngaseMlazi, otholakale eshonile endlini yakhe ngemuva kokuphuza amabhodlela esipirithi ewaxuba nejusi ethi wehlisa ukoma kwazise izindawo zokucima ukoma zivaliwe izwe lonke.
UMnu Peter John (37) odabuka eMalawi, kuthiwa wethuse amalungu omphakathi ephuza isipirithi ephindelela. Kuthiwa ukwenze lokho nje, ubekhala ngokuthi sekunesikhathi eside engabutholi utshwala womile, wathatha isipirithi wasiphuza esixube nejusi izinsuku ezimbili zilandelana.
Ngokuthola kwaleli phephandaba, kuthiwa ubenza lokhu nje, ubezincoma ezibiza ngenkunzi ekwazi ukuzikhandela isiphuzo sayo sokuthiba ukoma.
“Uqale ukuphuza le nto yakhe ngoMsombuluko eyincoma ukuthi yehla kahle. Ubexuba isipirithi nejusi, ethi kumdaka kamnandi, waze wayolala esadakiwe.
Uvuke ngoLwesibili ekuseni waqhubeka lapho egcine khona, wathenga elinye ibhodlela lesipirithi nejusi kanti selizomqumba phansi, washona.
“Ubenza lokhu nje, ubelokhu ekhala ngokuthi womele utshwala njengoba izindawo zokucima ukoma zivaliwe, utshwala bungatholakali,” kusho umthombo.
Uqhube ngokuthi uMnu John ubekhala ngokuthi useyehluleka wukubekezelela ukoma, wabe esezihlanganisela ikhambi elizomsiza, kanti useyazibulala.
Umphakathi waseMalukazi ubusathukile ngalesi sigameko, usola noMnu John ngokungazicabangeli ngokuphuza isipirithi ngoba efuna ukudakwa. Abantu bebeme izixongololo ngaphandle kwendlu yakhe, bebabaza ukuthi wezwa ngobani ukuthi le nto iyaphuzwa.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, usiqinisekisile lesi sigameko. Uthe amaphoyisa avule idokodo lophenyo ngowesilisa otholakale endlini yakhe eseshonile.
Uthe amaphoyisa asaphenya, bekungakaboshwa muntu.
Previous articlekusezandleni zikacele ukujezisa ustella
Next articlebazifake obishini abaculi abavakashelane kugonqiwe